Flow Free 4.3 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 4.3 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
ဂိမ္းမ်ား ပေဟဠိ Flow Free
Flow Free ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
တစ်ဦးFlow®ကိုဖန်တီးရန်ပိုက်တွေနဲ့ကိုက်ညီအရောင်များကိုချိတ်ဆက်ပါ။ Flow အခမဲ့စီပဟေဠိဖြေရှင်းဖို့တစ်ခုလုံးကိုဘုတ်အဖွဲ့ Pair ကိုအားလုံးအရောင်များနှင့်ကိုဖုံးလွှမ်း။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကဖြတ်ကူးသို့မဟုတ်ထပ်လျှင်ပိုက်ချိုးမည်, ထွက် watch!
အခမဲ့အဆင့်ဆင့်ရာပေါင်းများစွာမှတဆင့်ကစား, ဒါမှမဟုတ်အချိန်စမ်းသပ် mode မှာနာရီဆန့်ကျင်ပြိုင်ပွဲ။ အခမဲ့ဂိမ်းစီးဆင်းနေရာတိုင်းကြား၌စိန်ခေါ်မှုနှင့် frenetic ရန်, ရိုးရှင်းပြီးဖြေလျော့ပေးခြင်းကနေလာနေကြပါတယ်နှင့်။ သင်ဘယ်လိုကစားသငျသညျအထိဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်, Flow အခမဲ့ "ကိုရေကဲ့သို့စိတ်ကို" တစ်ဦးပါနှင့်အတွေ့အကြုံကိုပေး!
အခမဲ့ features တွေစီးဆင်း:
★ 2500 ကျော်အခမဲ့ပဟေဠိ
★အခမဲ့ Play စနှင့်အချိန်စမ်းသပ်သည် Modes
Flow အခမဲ့အပေါ်သူတို့ရဲ့အလုပ်အတွက် Noodlecake စတူဒီယိုမှအထူးကျေးဇူးတင်ရှိ, စူပါ Stickman ဂေါက်ကွင်း၏ဖန်တီးသူ,!
Flow Free အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Flow Free အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Flow Free အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Flow Free အား အခ်က္ျပပါ
Flow Free ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Flow Free အခ်က္အလက္
ထုတ်လုပ်သူ Big Duck Games LLC
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://privacy.bigduckgames.com
လက်မှတ် SHA1: 60:FC:D9:1E:0A:13:7E:E9:9A:23:82:E2:C9:53:73:AD:08:72:41:15
အဖွဲ့အစည်း (O): Big Duck Games LLC
Flow Free APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ